IFTIINKACUSUB.COM: Qisadii dhabta ahayd ee Dulqarnayn.
"Waxay ku warsan Dul-qarnayn xaggiisa, waxaad dhahdaa waxaan idinku akhrin xaggiisa war (waxyi)." Suurada Kahfi, Aayada 83 illaa 98.
Dul-Qarnayn waxa uu ahaa Nin boqora , oo uu Eebe makansiiyey dhulka kuna manaystay cilmi, xikmad iyo awood. waxa la soo arooriyaa inuu ahaa Nabi, hase ahaatee waxa uu ubadanyahay inuu ahaa Nin boqora oo ah adoon wanaagsan.
Qisadiisu waxay ku bilaabmaysaa safar uu ugu kicitimay galbeedka waxaanu helay qorraxda oo ku dhici meel dhoobo ah (muuqaalka), goobtaas waxa uu ugu tagay qoom iskugu jira dad xun iyo dad wanaagsan, kadibna Eebe ayaa ku dhahay Dul-Qarnaynoow waa inaad cadaabto ama ka yeelato wanaag, wuxuuna yidhi ruuxii dulmi fala waannu cadaabi (ciqaabi) markaasaa loo celin Eebihiis wuuna cadaabi cadaab daran, balse ruuxii rumeeya oo fala wanaag wuxuu mudan abaal fiican, waxaanan u dhihi amarkannaga fudayd.
Kadibna waa sii waday safarkiisii asagoo gaadhay dhul buuralay ah, waxaanu ka helay qoom ka duwan kuwii hore, kuwani ma aysan fahmayn luuqada Dul-Qarnayn kadibna waxay ka cawdeen laba qabiil oo waawayn waa Ya’juuj iyo Ma’juujwaxayna fasahaadiyeen dhulka ee nooga yeel xidheen gidaar ah si aynaan noogu soo gudbin.